Ny lehibe Mampiaraka ny vohikala ho an’ireo izay te-hahita Mampiaraka ny fifandraisana sy ny Fiarahana ho an’ny olon-dehibe.
ny Fiarahana amin’ny aterineto ho tokana ny ankizivavy sy ry zalahy avy manerana izao tontolo izao. Raha malahelo ianao, ary hoy ianao, izaho dia te-hiresaka sy hihaona, ny Mampiaraka toerana dia hanampy anao hahita afaka Mampiaraka, ny fifandraisana lehibe na Mampiaraka ny ara-nofo
«Ny Fiarahana amin’ny aterineto ny vohikala»dia midika hoe — ny Fitiavana ny tsara Tarehy
Izany fitiavana izany dia manosika antsika handroso, dia manome antsika ny tanjona eo amin’ny fiainana, hevitra vaovao sy ny olona vaovao. Fisoratana anarana eo amin’ny tranonkala dia tena maimaim-poana sy tsy maka fotoana be dia be, milaza fotsiny ny tenanao aho:
Isika dia nanolo-tena ny mpampiasa, ka Fiarahana tsy misy fisoratana anarana, tsy ampiasaina. Rehetra Tsy maintsy atao dia ny mamorona ny kaonty, manampy ny sary sasany, ary mameno ny mombamomba Mampiaraka na ny fivoriana ary manomboka mitady ny Fiarahana, ny fitia, ny firaisana ara-nofo na fitiavana
Mampiaraka toerana maimaim-poana →